Nodimandry tamin’ny faran’ny vola jona teo Anne Vanderlove (1943-2019). Vitsy ny Gasy mahalala hoe iza izany olona izany. Mpihira frantsay vavy namorona ny «Ballade en novembre», nangalan’i Erick Manana ilay hira nampitondrainy lohanteny hoe «Tsy ferana».
Anisan’ny hira nianaran’i Erick manana gitara fahiny hono io «Ballade en novembre» io. Amin’ny sofina sy saina ary fo gasy, mampientana ahy kokoa ny feo sy tonony nomen’i Erick Manana.
Misy fitia tsy mety maty
Fa mifikitra ao am-po
Hodian-tsy hita mankarary
Alevina tsy mety lo
Totofana vao mihamitsiry
Injao fa re mangirifiry
Rehefa ianao tsy tazana
Fitiavako anao tsy ferana
Maditra tsy hay lembenana
Mandoro raha kobonina
Ny lalana nizorantsika
Anie fitia tsisy hirika
Fa lalan-tokana izy ity
Ny vavahady rindrina
Ny fo mitempo sisa reko
Izy tsy mety mionona
Tsy te hahalala hoe hatreto
Misy tsy azo ihoarana
Mitia tsisy tahotra
Rodlish, na Arthur Razakarivony (1897-1965). Poety tsy fantatry ny olona ankehitriny intsony ihany koa. Ny tononkalo nosoratany, «Afo tsy matin’ny rano», anefa no nangalan’i Erick Manana ilay hira «Fitiavana kely». Tsy ny tononkalo manontolo no nasian’i Erick feony fa andininy telo amin’ny dimy. Najanony, ohatra, ny hoe «Zanak’omby, maniry kijana ; Sola-bato, fodian-janak’osy», «Zavatra tsy inona akory, Kinanjo nofisi-matory», «Vetsovetso ka lasa nihoatra, Nofinofy ka tiana hateza» :
Lamba nihelatra monja
Hanitra nentin’ny rivotra
Fitopan’ny zipo manonja
Fitiavana kely nisisika
Fitiavana kely tsy levona
Toa zavatra manitikitika
Toa sery nirina hampievina
Kinanjo nampiditra angano
Tonga afo tsy matin’ny rano
Maso niherika foana
Tsiky niantefa tsy fidy
Toa votsy nampangidihidy
Resaka an-tsoratra tamin’i Erick Manana : «Ny zavatra tsapako, hatramin’izay namoronako hira izay, dia izao : ny tononkira dia mozika hafa ankoatry n’ilay tena mozika ho ampivadiana aminy. Ny mampivady ireo dia tsy fanahiniana velively akory fa tena ilay mozika mihitsy no mitondra tonon-kira ho ahy (ary io dia mety ho thème hafa mihitsy ny tononkira henoko hifanandrify aminy fa tsy ilay thème original. Ohatra : “Tsy Ferana”). Na koa…ny mozika ny tononkira (izany hoe ilay mozikan’ny teny voalazako etsy ambony) no mitondra ny aingam-panahiko ahita ny feony mifanaraka aminy (ohatra : “Fitiavana kely”). Rehefa mamaky tononkalo ao an-doha dia tsy heno loatra ny mozika n’ilay teny, fa rehefa vakiana amin’vava miteny kosa…dia henonao ao sahady ilay mélodie ! Ny tiako ho ambara dia hoe, adinontsika indraindray fa ny teny anie ka mozika ary ny mozika dia teny ihany koa».
Azoko an-tsaina ny tian’i Erick Manana ho lazaina. Rehefa misy sahirana ny mpamaky ny lahatsoratro amin’ny teny gasy, dia atoroko hoe «Aza arahina amin’ny maso sy tenenina moana ao an-doha fotsiny, fa vakio am-bava, dia ny sofinao ihany dia manitsy ny fanononana». Fomba fizarana indray teny gasy io, ho an’izay nandia fianarana tamin’ny sekoly vazaha na mipetraka maharitra any Andafy ka very tadidy ny «ka-tra-na». Misy teny tsy mangarika ny maso, anefa mandratra ny sofina, rehefa avalan’ny vava.